You are here: Home somal Hay'adda wadaniga ah ee HYDA iyo Xidhiidhka Kubadda Cagta SL oo qalab ka gudoomay dhalinyaro reer Wa
Siciid Maxamed Saleebaan oo ha madaxa xubnaha Koox dhalinyaro ah oo ka timid dalka dibaddiisa gaar ahaan wadanka UK oo iyagu bixinayey maalgalinta kharashka tababarkaasi ayaa sheegay inay dalka u yimideen inay kaalin ka qaataan hormarinta Soports-ka Somaliland. “annagu waxaanu dalka u nimid sidii aanu uga qayb qaadan lahayn hormartinta Sportska Somaliland”sidaa waxaa yidhi midka mida xubnaha dhalinyarada reer UK oo ka hadlay munaasibadda xafladdaasi. Intaa ka dib Xoghayaha xidhiidhka Kubadda Somaliland Khadar Axmed ayaa masraxa ku soo dhaweeyey gudoomiyaha Xdhiidhka Kubadda Somaliland Axmed Sheekh Muxumed waxaanu ka ramay dareenkiisa ku wajahan tababarkana ay ka heleen dhalinyarada reer Somaliland ee dalka UK,waxaanu soo dhaweeyey gacanta ay ka helayaan walaalaha reer UK oo ilaa halkaa uga soo kixitimay inay caawiyaan Sportska Somaliland.
Waxaa isna halkaa k ahadlay Wasiirka Wasaaradda Ciyaaraha iyo dhaqanka Maxamed Ibraahim waxaanu ka Wasiirku ka waramay siday ugu faraxsan yihiin isla markaana u soo dhaweynayaan cidkasta oo gacan ka gaysanaysa hormarka dalka Somaliland gaar ahaan Sportska. Wasiirku waxa uu intaa ku daray inay meel fiican marayaan arimaha Soportska Somaliland isla markaana ay ka Wasaarad ahaan dadaal badan ugu jiraan sidii ay halka ay maanta marayaan kooxaha heerka sare iyo guud ahaamba bahda Soprtska Somaliland sare uga sii wadi lahaayee “maanta waxaanu soo dhaweynaynaa qalabkan qiimaha badan ee ay nagu wareejinayaan dhalinyarada reer UK ee u dhalatay Somaliland” ayuu yidhi Wasiirku. Tababarkan oo socon doona muddo laba cisho ah waxa ka qaybgalaya kooxaha heerka 1aad iyo Macalimiinta tababarayaasha ee kooxahaasi [Couches] ugu dambeyntiina Wasiirku waxa uu dhalinyarada reer UK ka gudoomay qalabka lagu maamulo xiliyada ay socodaan tartamada Ciyaaruhu sida Saacadaha Seedhi-walayaashu gacanta ku xidhaan iyo wixii kale ee looga baahan yahay laga helo goob ciyaareedyada caalamiga ah sida Tuulka qalabka Caafimaadka lagu qaato oo loogu tala galay in lagu daweeyo hadii ay goobtaasi ka dhacaan dhaawacyo soo gaadha mararka qaarkood kooxaha ku hirdamaya Garoonka Ciyaaraha. sida uu sheegau Siciid Maxamed Saleebaan tababarkan qaybtiisa kale waxaa lagu qandoonaa magaalada Burco ee Gobalka Togdheer maalmaha soo socda haduu eebe yidhaa. Magacyada xubnaha reer UK ee barnaamijka fuliynaa waxay kala yihiin. 1-Siciid Maxamed Saleebana [Somali youth Association] isla markaana ah gudoomiyaha xubnaha reer UK. 2- Cabdi Xakiim Yaasiin Ibraahim [Somali youth Association] xubin 3- Cabdi Naasir Axmed [dynamic Sports development] 4- iyo Khaalid Maxamed Cabdi [Safer Wales] 5-Cabdi Laki Xasan Nuur oo ka mida xubnaha dhalinyarada reer Burco ayaa isna kamid ahaa dadka ka qaybgalay munaasibadda furitaanka tababarkaasi. Xubnaha kale ee firin fircoon isla markaana ka qayb qaadanaya barnaamijkaasi waxaa ka mid ah Amiin Cabdilllaahi Xaasi iyo Khaalid Cabdi Aadan [jiilaani] oo ka mida bahda Ciyaaraha gaar ahaan arimaha kobcinta Sportska Somaliland.
Diyaariye: Somal Spots